Soo Laabasho + Barnaamij aan idiin kugu tala galay - Hoyga Aqoonta
Hoyga Aqoonta > Hoyga Barnaamijyada > Golaha Barnaamijyada
Soo Laabasho + Barnaamij aan idiin kugu tala galay
Golaha Barnaamijyada Waa barnaamijyoda kumbiyuutarradu ay ku shaqeeyaan dhammaantood
Nambarka Xubinka : 985
Taariikhduu xubinku is qoray golaha: Nov 2013
ka qayb galka: 48
Waxaa la qoray : [ 16-10-2016 ]
Assalamu Calaykum dhamaan aqoonyahanada , waxaan ismoogeen in muda ah xaaladaha soo mawada wacna.
Hadaan intaa uga gudbo iswareesiga maanta waxaan idiin wadaa barnaamij qiima wayn aktayda kaleh waxaana filaa in la heli doono aqoonyahano xiiseeya barnaamijkaan.
Xaqiiqatan barnaamijkaan uma baahna in laga faaloodo wayo inta badan way wada garanayaan dadka ku shaqeesta ama jecel dhanka Media-ha ama editing-ka.
Magaca barnaamij waa Adobe Master Collection CC 2015 waxuuna iskugu jiraa dhamaan barnaamijyada ay soo saarto shirkada caanka ah ee Adobe.
Dabinnada hoose kala daga
Waxaan rajenayaa in uu idin qancin doono insha allaah.
Mowduucii hore : Soo Laabasho + Barnaamij aan idiin kugu tala galay -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: EnG YaSiN
Saxiixa : EnG YaSiN
ignorance is a darkness
Warqad gaara u dir EnG YaSiN
Raadi qoraalladuu qoray/qortay EnG YaSiN
Jawaabta: Soo Laabasho + Barnaamij aan idiin kugu tala galay
Injinneere waan ka xumahay aniguba aan u horreeyee inaan jawaab waafiya laga soo bixin qoraalkaagan qiimaha iyo qaayaha leh. Waxaanse ku leeyahay ilaahay ha kaa abaal mariyo barnaaamijkan dad badan anfacaya oo qiimaha badan leh. Cinwaankaan ka helay soo laabasho. horay u socod wanaagsan injinneerre.Allaha ku baraeeyo
adobe, allaah, assalamu, caanka, calaykum, cc, collection, dabinnada, daga, dhamaan, gudbo, hoose, insha, iskugu, ismoogeen, iswareesiga, jiraa, kala, master, qancin, rajenayaa, saarto, shirkada, wacna, xaaladaha
Mowduucyada isu eg
Mowduuc Qoraaga mowduucan Golaha Ka qayb-gallo Ka qaybgalkii u danbeeyey
Faysalasha xoogga kugu soo gala tirtir Rooble Golaha Barnaamijyada 5 27-01-2014 09:00 PM
Sida ugu sahlan ee kumbiyuutarka loo demiyo barnaamij la'aan. Yaasiin Kumbiyuutarka & Internet-ka 4 22-06-2012 02:57 AM
Idiin digay dadkaygoow abwn: cabdi rabbi caaqil Gabayada 16 31-07-2011 04:35 PM
Barnaamij la'aan samee kumbiyuutarkaaga Rooble Kumbiyuutarka & Internet-ka 3 30-07-2011 01:07 PM
Yuutiyuub barnaamij la'aan kala soo deg Afrikaan Kumbiyuutarka & Internet-ka 2 22-04-2011 01:09 AM
Saacaddu hadda waa 06:18 PM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Waxaa tarjumay Faysal.Saacid.Shire